Rosia, Shina, ary ny Tosika Hisian’ny ‘Fiandrianana Nomerika’ · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Desambra 2016 16:16 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Türkçe, Español, Français, English
Ny Filoha Rosiana Vladimir Putin sy ny mpitarika Sinoa Xi Jinping. Loharano: Kremlin.ru, CC2.0
Tamin'ny faran'ny herinandron'ny volana Oktobra, nihaona tany Guangzhou ireo manampahefana sy olona ambony avy any Shina sy Rosia, ho an'ilay fihaonambe voalohany indrindra momba ny Haino aman-jery an-tserasera iarahan'i Shina sy Rosia. Nifampiarahaba ireo mpandahateny momba ny fivoaran'ny fiarahamiasa momba ny haino aman-jery nentim-paharazana sy nomerika, ary ny ezaka iombonan'izy ireo mba hiadiana amin'ny fanandraman'ny “haino aman-jery Tandrefana” hifehy ny habaky ny fampahalalam-baovao. Nanolotra kabary tao amin'ilay fihaonambe nanazavana tamin'ny antsipirihany ny olan'ny fifanindrian'ny fahatoniana an-tserasera ao amin'ny firenena, i Aleksey Volin, minisitra lefitry ny fifandraisandavitra sy ny fampitambaovao ho an'ny daholobe. Nifantohany ny fiarovana ny tambajotra sy ny fampandrosoana ny “rafitra fampahalalam-baovao – fifandraisana tsy azo tohinina”. Ilaina ny iantohana ny fahamarinan-toerana sy ny maha-tsy azo tohinina ny ampahany nasionaly amin'ny aterineto tsy hidonan'ny asa ivelany”, hoy izy niaro ny heviny.
Hatramin'ny nanorenana ny Fikambanan'ny Fiarahamiasa Shangai (SCO) tamin'ny 2009, niresaka matetika mikasika ny hetsika iarahana momba ny fiarovana an-tserasera ireo manampahefana Rosiana sy Shinoa. Napetraka ny fifanarahana manandanja ho mariky ny fiarahamiasa namafisina eo amin'i Rosia sy Shina tamin'ny 2014 sy 2015, tamin'ny nanasoniavan'ny firenena roa tonta fifanarahana iray mikasika ny fepetra fiarovana an-tserasera tamin'ny volana Mey tamin'ny taona lasa. Araka ny tenin'ireo mpanasonia ny fifanarahana, ny tanjona dia hamerana ny fampiasana ny teknolojia fampahalalam-baovao namboarina mba “hitsabahana amin'ny raharaha anatin'ny fitondrana; hanimba ny fiandriananana ara-politika, ara-toekarena ary fahamarinan-toerana ara-tsosialy; [ary] hanelingelina ny filaminam-bahoaka.”
Mitoetra ho ivon'ny fotokevitra politika an-tseraseran'ny firenena roa tonta ity tsindrimpeo napetraka momba ny fiandrianana nomerika ity, na mbola tsy marin-toerana aza ny fiarahamiasa momba ilay olana. Nisedra fahasahiranana tamin'ny fametrahana ny sehatra ny singan'ny fifanarahana tsy fanaovana herisetra vita tamin'ny 2015, amin'ny ampahany noho ny fiteny tsy mazava, fa indrindra indrindra vokatry ny fitohizan'ny fitsikilovana an-tserasera ataon'ny Shinoa. Tafakatra tamin'ny ambaratonga tsy mbola nisy toa azy tany alohan'ny taona 2016 ity asa ity, niaraka tamin'ny orinasa Rosiana mpikirakira fiarovana an-tserasera Kaspersky Labs nitatitra fanafihana an-tserasera miisa 194 nataon'ny Shinoa tao anatin'ny 7 volana voalohany tamin'io taona io fotsiny – raha 72 monja tamin'ny 2015. Nikendry ny sampan-draharahan'ny governemanta, ny fiarovana ary ny orinasa an'habakabaka ireny fanafihana ireny, hatramin'ireo orinasa momba ny teknolojia nokleary. Ary angamba nohamaivanina izy ireny: nilaza tamin'ny Bloomberg ny mpitondra tenin'ny Kapersky Labs fa manodidina ny 10% monja amin'ny mpanjifan'izy ireo no mifanakalo angon-drakitra mikasika ny fisomparana ny fiarovana ny tambajotran'izy ireo.
Loharano: Flickr, Open Democracy
Na teo aza ireo fanafihana, nanohy ny fiarahamiasany amin'ny fiarovana an-tserasera i Rosia sy Shina, farafaharatsiny imasom-bahoaka. Tamin'ny volana Aprily, natao tany Maosko ny fihaonambe voalohany teo amin'i Rosia sy Shina momba ny Fiarovana ny Aterineto, ary tonga volana vitsivitsy taty aoriana ny Haino Aman-jery anaty Aterineto momba ny Fihaonambe an'Atoa Volin. Fanampin'izany, araka ny Minisitra Lefitry ny Raharaham-bahiny, Oleg Syromolotov, in-droa isan-taona no nanao fifampidinihana tamin'ny manampahefana Shinoa momba ny olan'ny fiarovana an-tserasera ireo mpisolo tena ny Minisiteran'ny Raharaham-bahiny sy ny sampam-pitsikilovana. Na izany aza, tsy azo lazaina ho fifanarahana tena efa misy ireo fifanakalozana.
Zheleznyak [mpitantsoratra lefitry ny Filankevitry ny antokon'i Putin, Rosia Mitambatra]: Tena ilaina ny manohana ny fiandrianana nomerikan'i Rosia.
Ny fiandrianana nomerika dia mitovy, amin'ny lafiny maro, amin'ny fandraisan'i Kremlin ny “fiandrianana demokratika,” teny iray ampiasaina mba hanamarina ny zon'i Rosia mba hiala amin'ny foto-kevitra demokratika sasany amin'ny anaran'ny “fahamarinan-toerana” sy ny fiandrianany amin'ny raharahan'izy ireo manokana. Toy izany koa, mihantsy ny Amerikana matanjaka ny fiandrianana an-tserasera, fomba fijery mivelatra mikasika ny fomba fitantanana nomerika. Mametraka fahefana bebe kokoa eo am-pelatànan'ny fanjakana ny fijerin'ny Rosiana sy ny Shinoa ny Aterineto, ary ny mijery ny asa an-tserasera ho toy ny mitranga eo ambany fahefam-pitsaran'ireo fanjakana ireo, fa tsy ao anatin'ny tontolonà angon-drakitra tsy misy fanjakàna.
Raha tokony ho firaisana, manana fifandraisana namboamboarina i Rosia sy Shina izay mampiseho laharam-pahamehana iraisana: ny fahamarinan-toeran'ny fitondrana. Ho an'ny Rosiana, midika amin'ny ampahany ho faniriana ny fifehezana atao hoe tanteraka ny tontolo virtoaly ao amin'ny firenena io. Mazava izany, indrindra ao amin'ny tombontsoan'i Rosia mba hanara-maso ny fifamoivoizan'ny aterineto. Tamin'ny resadresaka niarahana tamin'ny Gazeta.ru, nanamarika i Andrei Kolesnikov, talen'ny Foibe Fandrindràna ny Sehatra Avon'ny RU, fa ireo ezaka amin'ny fanarahamaso, toy ny fitsirihana lalina ny fehezana (DPI), izay tsara petraka ao amin'ny fotodrafitrasa Shinoa momba ny Aterineto, dia nahazo be dia be ny fanarahamason'ny any Rosia. Manolotra hevitra koa izy hoe ireo fepetra mikendry kokoa, toy ireo fanafihan'ny lehilahy eo afovoany (MitM), izay nampiasain'i Shina tsara mba handinganana ireo ezaka fanafenana, dia mety hahazo fanarahamaso toy izany koa avy amin'ny manampahefana ao amin'ny governemanta Rosiana. Noho ny fanoheran‘i Rosia ny fanafenan'ny mpanjifa, mety tena hanintona manokana ny fanjakana tokoa ireo fitaovana ireo.
Voamarik'ireo hafa eo amin'ny sehatry ny IT Rosiana fa raha mbola mety hitombo ny fanarahamaso ataon'i Rosia ny aterineto, mety ho tena lafo vidy ny famoroana rafitra iray mitovy amin'ny “Aroafo Lehibe” ao Sina, ary voasakan’ ny fanahiana ara-politika sy ara-bola. Aleksei Os'kin, talen'ny fanohanana ara-teknika ao amin'ny ESET, orinasa miorina any Rosia mikirakira ny fiarovana an-tserasera, dia nahita fiakaran'ny fanarahamaso sy ny fanivanana, saingy tsy tena araka ny modely Shinoa. Raha nilaza izy fa “mihetsiketsika ny firenentsika dia mihetsiketsika manaraka ny zotra mitovy amin'ny ao Shina,” Nanipika ihany koa izy fa “tsy maka tàhaka ny nanaovan'ny Shinoa ny Aroafo” i Rosia. Mety ho lafo vidy loatra sady ara-teknika dia sarotra ny fanaovana izany: ” zavatra iray ny fibahanana adiresy aterineto, fa ny hanivana ary hanadihady ny angon-drakitra nampitaina koa mbola zavatra iray hafa tanteraka.”
Rakitsary: Ny Ligin'ny Aterineto Tsara Aro, vondrona nitàna toerana be tamin'ny fikarakarana ny fifanakalozankevitra momba ny fiarovana an-tserasera teo amin'i Rosiana sy ny Shinoa, manazava ny fomba hitaterana ireo tranonkala izay mivoy fampihorohoroana sy fampisaraham-bazana.
Habaka manohitra ny fotokevitra Amerikana
Mihoatra noho ny fifanakalozana fahalalana ilay fiarahamiasa stratejika eo amin'ny firenena roa tonta. Fanoitra hanosika ny fenitra naroso teo am-piandohan'ity taonjato ity izay nanendry ny aterineto ho toy ny faritry ny fahalalaham-pitenenana. Eny tokoa, ny fiarahamiasa teo amin'ny Rosiana sy ny Shinoa mahakasika ny fiarovana an-tserasera dia toa sandoka miorina amin'ny fanoherana ny fotokevitry ny Amerikana momba ny fitantanana ny aterineto.
Manao izay hahatonga ny teknolojia ho manan-trosa amin'ireo fanjakàna ny fiandrianana nomerika, raha tokony ho ny mifamadika amin'izay. Mampitombo ny fihetsehampo manohitra ny fotkevitra Amerikana sy ny fiahiahiana tsikombakomba eo amin'ny orinasa Tandrefana sy ny governemanta no namelona ny fikirizana hisian'ny fiandrianana nomerika. Tamin'ny volana May tamin'ity taona ity, nanambara ny fampiasana ny rindrambaiko vita eo an-toerana ho toy ny dingana maika dia maika amin'ny fiarovana ny fiandrianana nomerikan'i Rosia i Sergei Zheleznyak. Olo-malaza any Rosia, indrindra fa amin'ny sehatry ny IT, anisan'izany Igor Ashmanov, mpandraharaha teknika mivantambantana fiteny, ary vadin'i Natalya Kasperskaya (Tale Jeneralin'ny Kapersky Labs teo aloha) dia nanantitrantitra toy izany koa ilay hevitra.
Tsy milaza izany fa matahotra ny haavon'ny tahan'ny fidirana amin'ny aterineto ao amin'ny faritaniny Rosia, na ny fiparitahan'ny ny teknolojia nomerika. Fa midika izany hoe na dia mitady mpiara-miasa aza i Rosia amin'ny fametrahana fototra araka ny lalàna ao amin'ny firenena, ary angamba amin'ny hoavy, fototra iraisam-pirenena mba hahazoana antoka fa ny aterineto dia fitaovan'ny fanjakana fa tsy ireo tsy afapo aminy. Araka ny nanamarihan'i Evgeny Morozov azy ao anatin'ny boky Ny Fiheveran-dison'ny Aterineto, “Ny ankamaroan'ny fitondram-panjakana tsy refesi-mandidy no efa nanaiky sahady ny fitomboan'ny kolontsaina Aterineto ho toy ny tsy azo ihodivirana, kely ny safidy ananan-dry zareo, fa mba hahitana fomba hamolavolana azy hifanaraka amin'ny fomba fitantaran-dry zareo manokana – na sao ny hafa no handrafitra ny fomba tokony hitantaran-dry zareo azy. “Nanely izany fihetsehampo izany i Medvedev tao amin'ny tafatafany 2015 niarahany tamin'ny boky sy gazety Shinoa People's Daily, nanao hoe:
Tsy maintsy mipetraka eny alohan'ny fivoarana ara-teknolojika ny politika sy ny mpanao politika ary mahita vahaolana ara-potoana alohan'ny amoronan'ny teknolojia zava-misy vaovao.